Induction Ukufudumeza isixhobo sobhedu, ukunyibilika, ukubola
Ikhaya / ukufudumala okunyuswa kwamaxesha amaninzi / Isixhobo sokufudumeza ubushushu
Udidi: ukufudumala okunyuswa kwamaxesha amaninzi tags: Thenga isixhobo sokufudumeza ngaphakathi, umbane ophezulu, Inkqubo yokufudumeza imvamisa, Isixhobo sokufudumeza ukutshintshwa kwamaxesha amaninzi, isixhobo sobushushu esingenanto, yokutyhubela, lokutshisa, ukusetyenziswa kwesixhobo sokufudumeza, induction ukufudumeza ixabiso lesixhobo, izixhobo zokufudumeza ungeno, i-induction yokufudumeza induction, inkqubo yokufudumala
Induction Ukubonelela ngesiXhobo sezixhobo
I-HLQ Induction Heating Machine Co yenza uluhlu olubanzi lwe ukufakelwa kwezixhobo zokufudumeza kuqukwa uchungechunge lwamandla ovulo oluphezulu, uchungechunge lwamandla ombane ophakathi, uchungechunge lwefriji ye-ultrahigh yokufudumala, ukugquma, ukugungqa, ukuncibilika, ukudibanisa, ukunyusa, ukuqina, ukukhupha kunye nokutshintshwa kwamanzi kunye nokufakwa endaweni.
Imodyuli ye-IGBT kunye nobuchwepheshe obuncitshisiweyo bokutshintsha ubuchwephesha njengakwimveliso yomvelisi, ukuthembeka okuphezulu kunokwenza.
I-Small and portable, xa kuthelekiswa nomshini olawulwayo we-SCR kuphela indawo yokusebenza ye-1 / 10. Ukusebenza ngokusemgangathweni ukugcina amandla, ukusebenza kakuhle kunye namandla angagcinwa
Umvelisi uhlengahlengisa kuluhlu olukhulu lwamaxesha ukusuka kwi-1KHz ukuya kwi-2.0MHz, ufakelo lunokwenziwa ngokulula kakhulu ngokwencwadana yethu yesikhokelo.
Amandla asisigxina okanye imodi yokulawula umbane.
Ukubonakaliswa kwamandla okuphuma, ukuphuma kwexesha, kunye nombane wokuphuma.
Ithiyori yesixhobo sokufudumeza ngaphakathi
Kwezi zixhobo zokufudumeza ungeniso, uthotho lwesekethe ejikelezayo isetyenziswa, ngesiguquli esihamba rhoqo, amandla ombane asezantsi kunye namandla aphakamileyo okuphuma kwi-coil yoqheliso.
Oomatshini bochungechunge lwe-DW-HF-15KW kunye ne-DW-HF-25KW ziimodeli zokuqala eziphuhlisiweyo kwinkampani yethu, zisebenzisa izixhobo ze-MOSFET kunye ne-IGBT kunye nesizukulwane sethu sokuqala sokuguqula itekhnoloji yokulawula, oomatshini baboniswa ngesakhiwo esilula, ukuthembeka okuphezulu kunye nexabiso eliphantsi, kwaye kulula ukuzisebenzisa nokuzilungisa, kwaye ngoku ngoomatshini abasetyenziswa kakhulu eTshayina nakwamanye amazwe.
Kuluhlu lwe-DW-HF-35KW kunye ne-DW-HF-45KW lokutshisa kuye kwasetyenziswa oomatshini, imodyuli ye-IGBT kunye netekhnoloji yolawulo lwesizukulwane sesibini solawulo, olulawulo olwenziweyo kunye netekhnoloji yokuguqula. Kwezi teknoloji zintsha, amandla okuphuma kunye nokuhamba rhoqo kulawulwa ngokuzimeleyo. sisebenzisa izinto ze-IGBT kunye nokuhamba rhoqo kwamandla ombane ukulawula isekethe yokulawula amandla kwaye sisebenzisa izinto ze-IGBT, uthotho lweesekethe kunye nokulandela umkhondo ngokuzenzekelayo ukufikelela kutshintsho oluthambileyo kwikhosi yokuguqula, zonke ezi zinto zenza ukuba umatshini uthembeke ngakumbi kwaye wenze umatshini ubekhona ukusebenza ngokuqhubekekayo nge-100% yomjikelo womsebenzi.
Xa kuthelekiswa noomatshini abaneteknoloji yesizukulwana sokuqala, itekhnoloji yesizukulwane sesibini ifanele ngakumbi koomatshini abakhulu bamandla ukuze bafumane ukuthembeka okuphezulu.
Ngenxa yokwamkelwa kobuchwephesha obuphambili, i-DW-HF-35KW kunye ne-DW-HF-45KW matshini oomatshini acetized ngokoluhlu olukhulu lwamaza, ubungakanani obuncinci, isiguquli samanzi esipholileyo, ukuthembeka okuphezulu kunye neendleko zokulungisa ezisezantsi.
Ngaphakathi kuthotho lwe-DW-HF-70KW ukutyhulwa kwefowuniImodyuli ye-IGBT kunye netekhnoloji yolawulo lwesizukulwane sesithathu isetyenzisiwe, olo lulawulo oluthambileyo kunye nolawulo kunye netekhnoloji yokuguqula. Kule teknoloji, amandla okuphuma kunye nokuhamba rhoqo kunokulawulwa kwaye kulungelelaniswe ngokwahlukeneyo, imodyuli ye-IGBT kunye netekhnoloji yolawulo yokutshintsha ethambileyo isetyenziselwa ukujikeleza kwesantya esiphezulu sokulawula amandla okuphuma. Kwisekethe yokujikajika, i-IGBT kunye nokuhamba rhoqo kwesekethe kusetyenziswa ukufezekisa isantya esiphezulu kunye nolawulo oluchanekileyo lokutshintsha kokutshintsha. Ukwamkelwa kwetekhnoloji entsha akuphuculi kuphela umgangatho kunye nokuthembeka komatshini, kodwa kusombulula ingxaki yetekhnoloji kumandla amakhulu umatshini wokufudumeza kwaye yenza ukuba kube lula ukusebenza nge-100% yomjikelo womsebenzi.